Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan | oroict.com Solutions
Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Post in Barnoota Moobaayilaa, Marsaalee Ammee, Qafoo Moobayilaa
Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan
Ergaa gabaabaa(SMS) fi Lakkoofsa bilbilaa(contacts) deebifachuuf Tartiiba kanaa gadii hordofaa. #Share|#Like|#Comment: OROMO ICT
Bilbila Ammayyaawaa Android(SMART PHONES) keenya keessaa Ergaan gabaabaan (SMS), Lakkoofsi bilbilaa(Contacts), Suuraaleen(pictures), suursagalee(video) fikkf yoo nu jalaa bade akkamitti deebifanna ykn bayyanachiifna(recover)?
Bilbila keenya Ammayyaawaa(smart phone) irraa ergaan gabaabaan guyyaa guyyatti namoota adda addaatii dhimma dhuunfaas haa ta’u dalagaaf ergaa oollu yoo isin jalaa bade deebifachuu dandeessu.
Malli salphaan Ergaa gabaabaa bilbila Ammayyaawaa(smart phon) irraa nujalaa bade ittiin bayyanachiisuu(recover) dandeenyuun Fayyadamaa(APP) “SIM DATA RECOVERY APPLICATION” jedhamu fayyadamuudhaan. Malli kun “SIM MEMORY CARD READER” isin barbaachisa. yoo hin qabne ta’e abbaan fedhe Karaarraa(online) bitachuu ykn dukkaana meeshaan Elektrooniksii itti gurguramu irraa bitachuu qabdu. Sana booda, SIM keessan qafoo keessaa baasaa. “SIM MEMORY CARD READER” irratti dursitanii daataa biraa fe’uun hin barbaachisu, kunis yoo ergaa gabaabaa deebifachuu barbaaddan sana yoo deebifachuuf yaaltan waan dhoorkuuf.
Interneeta irraa Fayyadamaa(App) “DATA RECOVERY APPLICATION” jedhu koompuutara keessan irratti naqadhaa(download), sana booda ijaari(Install on your computer). Keessattuu Mosajjiiwwan tolaa “Freeware and Shareware) jedhaman keessaa “SIM CARD DATA RECOVERY, CARD DATA RECOVERY, WONDERSHARE DATA RECOVERY” fi kkf Fayyadamaa ykn Mosajjiilee tolaan Deetaa keenya bade sana duubatti deebi’anii barbaadanii bayyanachiisuu(recover) gochuu danda’aniidha. Moosajiilee koomputara keenya irratti ijaarre(install) sana sajoo qaxxaamuraa (shortcut icon) lama itti deebinee cuqaasuun(Double click) kaasuun fayyadamna.
Qafoo keessan Ergaan gabaabaan keessaa isin jalaa bade sana banaatii #SIM keessaa baasaa.
SIM CARD keessan MEMORY CARD READER duraan bittan sana keessa kaayaa. sana booda “READER” sana “PORT USB” dhaan koompitara keenyaatti suuquu qabna.
Sana booda koompitara keenya irraa Sajoo qaaxxaamuraa(shortcut icon) Fayyadamaa(App) deetaa bayyanachiisuuf feene sana kaasuu qabna. Gosa deetaa bayyanachiisuu barbaadnee filachuu(select file type you want to recover). Qabduu “SCAN or START” jettu cuqaasaa. (Click on SCAN or START BUTTON)
Dubbisi | Read Afaan Oromoo gara Teekinoolojitti fiduuf Gahee Ilmaan Oromoo
Obsaan hanga mosajjichi deetaa keessan bade sana barbaadee bayyanachiisuuf eeguun nurra jira. Sana booda Moosajjichi ergaalee badan hunda barbaadee walitti qabee waan fiduuf kanneen deebifachuu narnaadnu qofa keessaa filannee erga raawwannee booda Qabduu Bayyanachiisi ykn Hunduma Bayyanachiisi(RECOVER or RECOVER ALL Button) jettu cuqaasuu qabna.
Xumurarratti Qabduu Sakatta’i(Browse Button) jedhu cuqaasuun Xurree(Path) deetaan keenya itti nuuf olkaawamu filanna(kunis Memory Reader) itti sakkaane sana ta’a. Sana booda Qabduu Tole(Ok Button) cuqaasuun xumurra.
Sana booda “READER” sana koompitara keenya irraa buqqifnee, SIM keessaa baafannee, SIM keenya mobile keenya keessatti galfannee banuudhaan ilaalla. Ergaan gabaan bade sun nuuf debi’ee argachuu qabna, SIM irratti jechuudha.
Gurraandhala 16, 2018 at 7:23 pm
bayyee galatooma lammiitu lammiif qorichaa !!!!!!!!!!!!!!